Nepal Auto | अटो शो बजार प्रवद्र्धनका लागि ठूलो प्लेटफर्म हो
अटो शो बजार प्रवद्र्धनका लागि ठूलो प्लेटफर्म हो 20 Bhadra, 2075
कार्यवाहक अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल
आगामी भदौ २६ देखि ३१ गते सम्म राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा नाडा अटो शो २०१८ हुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालसँग लिइएको अन्तर्वार्ता :
बजेटमार्फत करको दरमा बृद्धि भएपछि अटोमोबाइल्सको कारोबार प्रभावित भइरहेको समयमा आयोजना गर्न लागिएको अटो शोबाट नाडाले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?
नाडाको इतिहासमा हामीले अहिले तेह्रौ पटक अटो शो आयोजना गरिरहेका छौ । यो नेपालमा आयोजना हुने सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक व्यावसायिक मेला हो । राजश्वको सवैभन्दा ठूलो स्रोत भएको कारण राज्यको पनि यसमा विशेष ध्यान पुगेको हुन्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रबाट मात्रै राज्यले झन्डै १ सय अर्ब हाराहारीको राजश्व संकलन गर्दै आइरहेको छ । जसका कारण यो क्षेत्र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आइरहेको छ । सर्वसाधारणको आयस्रोतको माध्यम पनि भएको हुँदा अटोमोबाइल क्षेत्रमा सवैको चासो उत्तिकै मात्रामा पुगेको हुन्छ ।
तपाइले भनेजस्तै करको दरमा व्यापक बृद्धि गरिएका कारण अहिले अटोमोबाइलको कारोबार खस्किरहेको छ । यसका बावजुद हामी व्यवसायीहरु एकजुट भएर मेला अयोजना गरिरहेका छौ । यसले ग्राहक, राज्यका निकाय र स्वयं व्यवसायीमा समेत सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौ । जतिसुकै ठूलो समस्यामा परे पनि कम्पनीहरुले आ–आफ्नो उत्पादन र सेवाका वारेमा जानकारी दिई बजार प्रवद्र्धन गर्नैपर्ने हुन्छ । जसका लागि नाडाले मेला अयोजना गरी ठूलो प्लेटफर्म उपलव्ध गराइदिएको छ । यस प्रकारका मेला आयोजना हुनुको प्रमुख उद्देश्य भनेकै आफूले कारोबार गर्ने उत्पादन तथा सेवाका बारेमा उपभोक्तालाई अधिकतम जानकारी दिई बजार प्रवर्दन गर्नु हो । सोही मर्मअनुसार हामी सवै व्यवसायी मेलालाई भव्य तवरबाट सम्पन्न गर्न एकजुट भएका छौ ।
यसपटकको मेलामा व्यवसायीहरुको सहभागिता कस्तो छ ?
एकदमै उत्साहजनक छ । अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा व्यवसायीहरुको सहभागिता झनै बढेर गएको छ । नयाँ नयाँ कम्पनीहरु सहभागी भइरहेका छन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष नयाँनयाँ ब्राण्डका गाडी तथा मोटरसाइकल आयत हुने क्रम बढिरहेको छ । तर प्रदर्शनीस्थलको क्षमता भने बढ्न सकिरहेको छैन । दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे लगायत केही स्पेयर पार्ट्स र कम्पोनेन्टका लागि छुट्टाउँदै जाँदा यसपटक स्थान अभावका कारण वैबक र कर्मसियल तथा हेभी कमर्सियल सेगमेन्टका लागि छुट्टै स्टल उपलव्ध गराउन सकिएन ।
प्रदर्शनी स्थलको विषयमा नाडाले हरेकवर्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि उक्त मागको सम्वोधन भने हुन सकिरहेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ?
हो हामीले हरेक बर्ष अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल चाहियो भनेर सरकार लगायत सम्वन्धित पक्षसंग माग राख्दै आइरहेका छौ । यो विषयमा राज्य पनि त्यत्तिकै मात्रमा संवेदनशिल छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा एउटा पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल नभइदिँदा अटो शो लगायत अन्य ठूला व्यवसायिक मेला आयोजना गर्न निकै नै सकस भइरहेको अवस्था छ । अव स्थायी सरकार पनि बनेको छ । आशा गरौ यो विषयमा राज्यले छिट्टै पहलकदमी लिने छ ।
अघिल्ला अटो शोहरुमा पार्किङ, फुड कोर्ट र मिडिया डेस्कको व्यवस्थापन निकै कमजोर देखिएको थियो । यसपटक कसरी व्यवस्थित गराउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले यसपटक सुधार गरेका छौ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरेर व्यवस्थित गराउँदै छौ । त्यसैगरी रेष्टुरेन्टहरुका लागि पहिलेको तुलनामा ठूलो स्पेस उपलव्ध गराएका छौ । मिडिया डेस्कको विषयमा पनि हामीले यसपटक निकै नै सुधार गरेका छौ ।
अटो शोमा स्वदेशी ब्राण्डको सहभागिता र पछिल्लो समय लुव्रिकेन्ट्सको बजार अवस्थाका बारेमा पनि केही बताइदिनुस् न ?
विगतका बर्षहरुका झै यसपटक पनि पिएलओ सहित केही अन्य स्वदेशी ब्राण्डका लुव्रिकेन्ट्सले समेत मेलामा सहभागिता जनाएका छन् । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि भनेर नाडाले स्टलको भाडामा सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । जसबाट सवै ब्राण्डका स्वदेशी उत्पादनले फाइदा लिन सक्छन् ।
(कार्यवाहक अध्यक्ष दुलालसँगको विस्तृत अन्तर्वार्ता केही दिनमै प्रकाशन हुने अटोमोबाइल मासिकको नाडा विशेष अंकमा पढ्न सकिने छ ।)
ग्यारेज इक्विपमेन्टको उत्पादन र यसको विक्री वितरणलाई हेर्दा हामी आजका दिनमा भारत...